फलफूल–सब्जी कति खाने ? डब्लूएचओको मापदण्ड यस्तो छ
प्रकाशित मिति: मंसिर १०, २०७८ / sancharlaya
एजेन्सी । यदि तपाईं फलफूल–सब्जी कम सेवन गर्नुहुन्छ भने सावधान ? किनकि यसो गर्नाले तपाई कुपोषणको सिकार हुँदै हुनुहुन्छ । यसको खुलासा भारतका एक वैज्ञानिक रिपोर्टमा प्रकाशित भएको छ । फल तथा सब्जी भिटामिन एवं माइक्रो न्युट्रियन्टको राम्रो स्रोत हो । यी तत्वको कमीले मुटु, मधुमेह र अन्य प्रकारका गैरसंक्रमक रोगलाई बढावा दिन्छ ।